I-Royal Blue Villa ene-Swimmingpool yangasese eshisayo
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Diana
I-Royal blue Villa inengadi yangasese engaphezu kuka-1000m2 kanye nechibi
(ichibi nengadi yakho kuphela)
konke okudingayo ngeholide elikhululekile nge-whirpool endlini yokugezela..
I-villa ilungele abantu abadala abangu-6 kanye nezingane ezi-2 (umbhede owengeziwe)
indawo yegeyimu ngaphandle ene-pooltable, i-pingpong, itafula lebhola lezinyawo nemicibisholo... amathoyizi engeziwe ezingane... 2 TV's Netflix kanye nesiteshi sokudlala
Siyakwamukela ku-Royal Blue Villa, ngicela ungivumele ngikuhambise ngivakashele i-villa yeqiniso.
Uma ungena endaweni engaba ngu-1000m2.. Uzobona ivulandi elinetafula le-pool kanye nemicibisholo kukhona ifeni yesilingi lapho ukuze uthole umoya owengeziwe ngezinsuku ezifudumele. Futhi ngaphambili ungakwazi ukupaka imoto yakho ngaphakathi kwesango. Ngaphambili iphinde ibe netafula le-ping pong kanye netafula lebhola
Engadini engemuva uzothola i-swimming pool enemibhede yelanga. ezinye izindawo zokuhlala ezengeziwe, usofa ophumuzayo wabantu abangu-4 kanye netafula lokudlela. Kukhona ibha yangaphandle kanye ne-bbq. Isikhala esanele sokudlala umdlalo wethenisi noma ibhola elithile.
Ngaphakathi kwe-villa floor floor uzothola igumbi lokuhlala eline-sat. indawo yokuhlala ye-tv, itafula lokudlela, ikhishi elivulekile
Ikhishi lihlome ngokuphelele, linohhavini, i-microwave, i-boiler yamanzi, i-coffeemaker, i-dishwasher, umshini wokuwasha, i-grill, i-toaster nakho konke okunye okudingayo ...
Kukhona igumbi lokulala elilodwa phansi futhi lihlukanise igumbi lokugezela elineshawa nendlu yangasese.
Phezulu uzongena endlini yokuphumula yesibili ene-smart tv ene-netflix ne-playstation3 enemidlalo engaba ngu-20.
Kukhona ikhofi elincane nekhona letiye kanye nesiqandisi esengeziwe uzothola ikhabethe elikhulu elinezincwadi, imidlalo namathoyizi ezingane.
Kunamakamelo okulala angu-2 amakhulu elilodwa elinesihlalo sokubhucungwa kanye elinemibhede yabantu ababili, umbhede owumbhede owengeziwe, amakhabethe amakhulu.. kanye ne-dresser eyengeziwe nesibuko.
Ekugcineni, uzongena endlini yokugezela enkulu emangalisayo ene-whirlpool kanye neshawa enkulu yokuhamba ngezinyawo,
enye indlu yangasese eyengeziwe ihlukaniswe...
I-villa ihlome ngamathawula, amathawula olwandle, i-shampoo, i-showergel njll.
4.93 ·42 okushiwo abanye
I-villa itholakala endaweni ethule ephephile Unemizuzu embalwa. from the sea.. to go to a nice beach its about 10min away..useduze ne el gouna, marina, shopping mall and the old city sekalla all reachable in 15 min drive
Sihlala eduze ne-villa ngakho-ke noma yini esingayenza ukwenza ukuhlala kwakho kuphelele sikhona lapho ngenxa yakho.
ukuze nje sikunikeze imibono ethile esingakwenzela yona
◇thatha isikhumulo sezindiza
◇letha njalo ekuseni ukudla kwasekuseni okusha
◇ usuvele uthole uhlu lwakho lokuthenga futhi ululungiselele ku-villa
◇Noma singakulethela esitolo esikhulu lapho ufika
◇ukusiza ngoku-oda ukudla noma ukukuthathela ukudla ngokwesibonelo mcdonalds,pizzahut, kfc noma mhlawumbe ufuna ukuzama ukudla kwaseGibhithe konke kungenzeka
ukuze nje sikunikeze imibono ethile esingakwenzela y…
Izilimi: العربية, Nederlands, English, Deutsch